Oh.. My Blog!: Black & White Age
Black & White Age
ကမ္ဘာကြီးပြားသွားခြင်း နှင့်အတူ Information Age ထဲတွင် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ အတူတကွ ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်။ စီးပွားရေး လူမှုရေး နည်းပညာ များသာမက စိတ်ခံစားမှု များကို ပင် တယောက်နှင့်တစ်ယောက် မျှဝေခံစား ၍ ရနိုင်သော ခေတ်တခေတ် ကိုပင် ရောက်လျက်ရှိသည်။ ထိုခေတ်သည် ပညာရပ်တစ်ခုကို သင်ယူထားသော သူတယောက် အား အချိန်နှင့်အမျှ အသစ်ရှာဖွေတိုးတက်မှု ထဲသို့ အလိုတူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ ဆွဲခေါ်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေ အရောက်တွင် ဆရာဟူ၍ အတိအကျ မရှိပေ။ မျှဝေခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် ဆရာဖြစ်လိုက် တပည့်ဖြစ်လိုက် ပုံစံမျိုးနှင့် လည်ပတ်လျှက် ရှိသည်။ ထိုအခါ ပြဿနာမှာ အချက်အလက်များ ဖောင်းပွလာခြင်း ဖြစ်သည်။ များပြားလာခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလိုရှိသော အချက်အလက် ကို စစ်ထုတ်ယူနိုင်သော အရေအချင်း မရှိပါကေ၀၀ါးလာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတော့သည်။ လူတစ်ယောက် ၏ ဦးနှောက် အလုပ်လုပ်ပုံအရ ဦးစွာ ကိုယ်သိခဲ့သမျှ အချက် အလက်များ မှတ်သားထား ရသည်။ ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် အချက်အလက်များကို ဆွဲယူ အသုံးချ၍ တွက်ချက်ရသည်။ ကိုယ်လိုအပ် သော အချက်အလက်များနှင့် တွက်ချက်မှုကို ချိတ်ဆက်ပေး နိုင်သော မှတ်ဥာဏ်မျိုး ဥာဏ်ရည်မျိုး ရှိရသည်။ ထိုအထဲတွင် ပြဿနာ ပေါ်လာသော နေရာမှာ အချက်အလက်များ မှတ်သားထားမှု ဖြစ်သည်။ တရားသေ မှတ်သားထားရသော အချက်အလက် များ ရှိသော်လည်း ပုံမှန် အားဖြင့်မူ Information Age ထဲတွင် များပြားစွာ မှတ်သားထားရန် မည်သူကမျှ မကြိုးစားကြ။ ကိုယ်လို အပ်သော အချိန် ထုတ်ယူ အသုံးချနိုင်ရန် အတွက် ချိတ်ဆက်နိုင်မှု ကိုသာ မှတ်သားထားကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ အရေအချင်းမရှိ ခဲ့လျှင် Information Age က ထိုလူအား ပြင်းထန်စွာ နှိပ်ဆက်တော့သည်။ ထိုအချက်သည်က ရှုပ်ထွေးခြင်းေ၀၀ါးခြင်း များ၏ အစပထမအဆင့် တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိလျက်ရှိသည်.။
ရှုပ်ထွေးမှု. ဖောင်းပွမှု.. အကျိုးတစ်ခုကြောင့် အကြောင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှု.. အဖြေထုတ်ရန် ခက်ခဲလာမှု တို့ကြောင့် တဖြည်းဖြည်းဦးတည်လာသည့်ခေတ်မှာ Age Of Complexity ဟု တင်စားရမလောက်ပင်။ နည်းပညာ ၏ သွားရာလမ်းကြောင်းကို စိတ်ကူးယာဉ်ပျံ ဖြင့် လိုက်ကြည့် မည်ဆိုပါက ထိုကဲ့သို့ အတွေးများ (စိတ်ဒြပ်) ရှုပ်ထွေးမှုသာမက ရုပ်ဒြပ်များနှင့်ပင် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိ၏။ ဖြစ်နိုင်ခြေ စိတ်ခံစားမှု မြောက်များစွာ ထည့်သွင်းပေးထားသော AI တွက်ချက်မှုပါသည့် ပရိုဆက်ဆာ တလုံးသည် ဦးနှောက်၏ နေရာသို့၊ ဆဲလ်တစ်ခုမှ မျိုးပွားမှုကြောင့် မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ကလုန်း လုပ်ထားနိုင်သော နည်းပညာ၏ အအောင်မြင်ဆုံးအဆင့်သည် သွေးစွမ်းအင် နှင့်လည်ပတ်သော လူသားယာဉ် တစင်းအဖြစ်သို့။ ထိုအခါ အမှား မလုပ်တော့အောင် ပရိုဂရမ်သွင်းထားသည့် ပြီးပြည့်စုံသော လူသားတစ်ယောက်သည် အမိဝမ်းတွင်းမှ ထွက်လာသော မူလလူသားအား ကမ္ဘာမြေပြင်တွင် မထားချင်တော့ လောက်အောင်ပင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော် တပြိုင်နက်ထဲ ကြီးထွားလာသော လူ့ယဉ်ကျေးမှုသည် မူလလူသားအားလည်း ဖယ်ရှားမရအောင် ကာကွယ်ပြန်သည်။ အချိန် ခွန်အား ငွေကြေး များစွာ သက်သာသော အစစ်အမှန် ခံစားမှုပေးနိုင်သော အတုအယောင် ပရိုဂရမ် များစွာသည် မူလလူသား ၏ ခံစားနိုင်မှု အရေအချင်းကို လျော့ချပြစ်လိုက်သည်။ ခံစားမှု၏ အမြင့်ဆုံးနှယ်ပယ်တွင် ကျက်စားကြသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ ကိုယ်ချင်းစာတရားများ သည် သိသိသာသာပင် ချေပျက် ဖျက်ဆီးသွားကြတော့သည်။ ထိုအခါ ရာဇ၀တ်မှုများဆီသို့ လော့ဂျစ်ပိုမိုဆန်လာသော စိတ်ကူးများဆီသို့ စက်ရုပ်ဆန် လှုပ်ရှားမှုများဆီသို့ မည်သည့်နေရာတွင် အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်မည်ဟု စဉ်းစားမရနိုင်အောင် များပြားလှသော ဖြစ်နိုင်ချေ များကြောင့် အရှုပ်ထွေးဆုံးသော တရားစီရင်ရေးကျမ်းများဆီသို့ ထို့နောက်… Age of Complexity ဆိုသော ခေတ်တခေတ်ဆီသို့…..။
Age Of Black & White
လူသားများအား ထုတ်လုပ်သော ဌာနတခုတွင်ဖြစ်ပါသည်။ လူဖြစ်ရန် အချိန်စေ့သွားသော ကလေးများကို ဖန်ပြွန်ထဲမှ ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ထိုကလေး၏ ဆံချည်မျှင်ကို နယူထရွန် ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့၍၎င်း 10cc မျှဆွဲထုတ်စုပ်ယူလိုက်သော သွေးများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့၎င်း ပို့လိုက်သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ဌာနအသီးသီးမှ အဖြေများထွက်ပေါ်လာသည်။ ဆံချည်မျှင်ကို ခွဲစိတ်ခြင်းမှ ထိုလူသားတယောက်၏ Antibody ထွက်နိုင်မှုနှုန်းထားများ သွေးခွဲစိတ်မှုဌာနမှ ဟေမိုဂလိုပင်ပါဝင်မှု Cell တခုကြီးထွားနိုင်မှု ပျက်စီးသွားနိုင်မှု အချိုးအဆများ.။ ထိုအဖြေတို့ကို ဒေတာ အဖြစ်ယူ၍ ဌာန၏ဗဟိုစနစ်ထဲသို့ ထည့်သွင်း တွက်ထုတ်လိုက်သောအခါ ကလေးငယ်အား ကိုယ်ပိုင် ID တခုကို အဖြေတခုအဖြစ်ပေးလိုက်သည်။
ID (Name)= 1BZ992500
Date of Birth =9September 2500.
Fundamental Probability of AI = 60 %
Date of Death = 23 November 2542.
ထိုကလေး၏ ဦးနှောက်ထဲသို့ မှတ်သားထားနိုင်သော အရည်တစ်မျိုး ထည့်သွင်း ပေးခြင်း။ ရာဇ၀တ်မှု မဖြစ်စေရန် တွေးတောစေနိုင်သော ဟိုမုန်းများ ထည့်သွင်းပေးခြင်း. မျက်လုံးများ လက်ဗွေရာများ ဗီဇအသံလှိုင်းထုတ်လွတ်မှု များ ကို အချက်အလက် ID တခု အဖြစ်မှတ်သားထားခြင်း တို့ ပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ လူ့လောက ယန္တရား ထဲသို့ စတင် လည်ပတ်ခွင့် ပြုလိုက်သည်.။
လူသားများသည် နှစ်ပေါင်းရာချီ၍ ခံစားလာခဲ့ရသော Complexity Age ၏ ကမ္ဘာပျက်မတတ် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေထဲမှ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တစ်ခု ကြောင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ကြည်လင် ရှင်းလင်းသောခေတ် Age of B&W ထဲသို့ ရောက်ရှိနေ ကြပြီ ဖြစ်သည်.။
Modern Material ၏ အသစ် အသစ်သော တွေ့ရှိမှုများက ဆီလီကွန် ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ရိုက်ချိုးခဲ့သည်.။ Electron ကို အသုံးချခဲ့ရသည့် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာရပ် များကို အဆုံးသတ်ခါ Proton ကို အသုံးချနိုင်ခဲ့သည့် ပရိုထရောနစ် နည်းပညာသည် စွမ်းအင်ရှားပါးမှု. ပတ်ဝန်းကျင် လေထု ညစ်ညမ်းမှု. အသုံးပြုခြင်း ကြောင့် အန္တရယ်ရှိ နိုင်မှု တို့ကို လှပစွာ ရိုက်ချိုးခဲ့ပြန်သည်.။
ကမ္ဘာမြေကြီး ၏ဆွဲငင် အားမျိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သော နည်းပညာက လူဦးရေ ထူထပ်မှုနှင့် နေရာရှားပါးမှုကို ပြေလည်စေသည်။ လေထုထဲတွင် တွန်းကန်အား အလွှာနှင့် ဆွဲငင်အား အလွှာတို့ ပြန်ထပ်ထားသော အိမ်ရာပေါင်း များစွာသည် သရီးဒိုင်မေးရှင်း လိပ်စာများနှင့်။
ယာဉ်များသည် တိကျသော ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာ Protocol တစ်ခုဆီ ရှိခြင်းကြောင့် ဦးတည်ရာ ရွေးပေးယုံနှင့် လိုရာခရီးကို လမ်းကြောင်းရှာ သွားပေးသည်။ တစ် စင်တီမီတာ အရောက်တွင် တွန်းကန်နိုင်သော သတ္တု ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ထိုယာဉ်များသည် များပြားလှစွာ သွားနေသော်လည်း တစင်းနှင့် တစ်စင်း ထိခိုက်မှုမဖြစ်ကြ.။
မိုင် ထောင်ချီခန့် အကွာအဝေးကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ရောက်သွားစေရန် Relativity Effect ထည့်ထားသော Tube ကြီးများက အလွန်ဝေးသော နေရာများကို လမ်းကြောင်းချ တည်ဆောက်ထားပေးသည့် ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီး များအဖြစ်တည်ရှိလျက် ရှိသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ကြည်လင်ရှင်းလင်း နေသော ကမ္ဘာကြီးမှာ စနစ်တကျ ဖွိ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်.။ ထိုခေတ်ထဲတွင် Date of Dead နီးလာသော စွန့်စားမှုကို ၀ါသနာပါသည့် သန်းကြွယ် သူဌေးကြီးများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။ သေမင်းကို တပတ်ရိုက်သော စီမံကိန်း ဟူ၍ နာမည်ပေးထားကြသည်.။ သို့သော် ထိုဝန်ဆောင်မှုမှ မည်သည့် အာမခံချက် မျိုးမှ မပေးပါ။ အချိန်များကို ဆန့်ကျင်နိုင်သော်လည်း လူ၏ပုံသဏ္ဌာန် ပျက်သွားနိုင်ပါသည်။ ဥာဏ်ရေဥာဏ်သွေး မပျက်ဆီးနိုင်သော်လည်း မှတ်ဥာဏ်များ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။ နှိုင်းဆ နိယာမ နှင့် မဟာပေါက်ကွဲမှု သီအိုရီ တို့ပေါင်းစပ်ထားသည့် အသစ်တွေ့ ရှိလာသော Hybrid Theory တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် လျှပ်စစ် စက်ကွင်း တို့ သိပ်သည်းစွာ ထည့်သွင်းထားသော Tube ထဲတွင် ပွတ်တိုက်အားအခံနိုင် ဆုံးသော သတ္တုတစ်ခုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ယာဉ်တစင်း တွင်လိုက်ပါ၍ ဂြိုလ်တစ်ခုပေါ်သို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ပြစ်လွတ်လိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်.။ ထိုလုပ်ငန်းမှ.. ”သင့်ထက် အသက်ရာချီကြီးသော လူသားတယောက်ကို ဂြိုလ်သားတစ်ယောက် အဖြစ် လက်ဆွဲနုတ်ဆက် နိုင်မည့် အခွင့်အရေး” ဟူ၍ ကြော်ညာထားသည်..။
နာဆာ အာကာသစခန်းဌာန မှ အင်္ဂါဂြိင်္ုလ် ပေါ်တွင် သက်ရှိသတ္တ၀ါများ နေထိုင်သည်ဟု တရားဝင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်…။
Posted by Tesla at 2:16 PM